ရွာသားတစ်ယောက်၏ ဖွင့်ဟအဆိုပြုချက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Opinions & Discussion » ရွာသားတစ်ယောက်၏ ဖွင့်ဟအဆိုပြုချက်
Posted by မိုးချမ်းမြေ့ on Jan 10, 2012 in Opinions & Discussion |5comments
အခုလား….?…။ ဟင့်အင်း….။ မတွေ့မိပါဘူး…။ ရွာထဲမှာ..စိတ်ရှုပ်စရာတွေ.. ပူပင်စရာတွေ တွေ့နေရတယ်လို့…မထင်မိပါဘူး…။ အော်….ရွာဆူတာလား…။ ရှိပါတယ်…။ ရှိမှာပေါ့…။ ရွာဆိုမှ တာ့..ဆူတတ်တာက..သဘာဝပဲလေ…နော့ဗျာ..။
ဒါကလည်းဗျာ…တစ်ရွာလုံးမှာဆူနေတာမဟုတ်ပါဘူး..။ မမြင်သာပေမယ်..ထင်သာတဲ့နေရာ လေးတစ်တစ်ခုလောက်မှာသာ..ကွက်ပြီးဆူနေတာပါ…။ ရွာပိုင်သူကြီးခင်ဗျား…လွတ်လပ်စွာဆူခွင့်ရှိပါ စေ..။ (ဒါက…ချွင်းချက်အနေနဲ့တောင်းဆိုမှုပါ..)
ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့…လွတ်လပ်တဲ့ဆူညံမှုဆိုတာမရှိရင်..တိုးတက်မှုဆိုတာမျိုးက နှေးကွေး တတ်တယ်လို့ ထင်မိလို့ပါ…။ ခုလည်းကြည့်လေ..။ တစ်ထောင့်တစ်နေရာက..ဆူညံနေမှုကိုကြည့်ရင် ရည်ရွယ်ချက်အားလုံးဟာ…အကောင်းဘက်ကိုချည်းဦးတည်ပြီး…ဆူနေကြတာမဟုတ်လား..။ ဒါမျိုးက ရွာထဲမှာတင်မကပါဘူး..။ ရင်းနှီးလွန်းတဲ့ မိသားစုဆွေမျိုးအ၀န်းအ၀ိုင်းအတွင်းမှာတောင်..ဆူတတ်ကြ တာပဲလေ..။ ဆူပါစေ….
အဲ….အဲ့ဒီကမှ…တစ်ချို့တွေကျတော့လည်း..မင်းတို့ဆူညံမှုက…အကြံအဖန်ကွ..။ ငါတို့ဆူညံ မှုကမှ..အမှန်အကန်ကွ..ဆိုပြီး..ဖြစ်နေရင်တော့….ဒါဟာ…တစ်ဦးချင်းစီနဲ့ဆိုင်တဲ့…ပုဂ္ဂလ..ဆူညံမှုလို့သာ ပြောရမှာပါ..။ ဒါဆိုရင်တော့….ဆူညံမှုဆိုတဲ့အဆင့်ထက်ကျော်လွန်တဲ့…ရမ်းကားတဲ့အမှုလို့..ဆုံး ဖြတ်ရမှာပါပဲ…။
ရှိနေမှာပါ…။ သူကြီးနဲ့ရွာသူရွာသားအပေါင်းတို့ရေ….ဘယ်သူမှလည်းတားလို့တတ်နိုင်မယ်မ ထင်ပါဘူး..(အထင်ကိုပြောတာနော်)..။ မြင်တာပြောရရင်လည်း…တားလည်းမတားသင့်ပါဘူး..။ ဒါက.. ရွာတစ်တရွာတည်ပြီဆိုရင်..မရှိမဖြစ်လို့ပြောရမလိုကိုပဲ…လိုအပ်တာမျိုးမဟုတ်လား…။
မိမိလေ့လာသင်ယူမိသလောက်မှာ…တွေးခေါ်မျှော်ဆပြီး…ကျင့်ကြံနေထိုင်ပြောဆိုခြင်းနဲ့ထပ်တူ အခြေအနေတစ်ခုကို တင်ပြတဲ့အခါမှာတော့…ရိုးသားသူမဖြစ်နိုင်သေးရင်တောင်မှ…အတတ်နိုင် ဆုံး ရိုးသားမယ်ဟေ့…ဆိုတဲ့ သံဓိဌာန်မျိုးချပြီး….ဘယ်သူမှ ကိုယ့်ရဲ့စာကိုမဖတ်ခင်…ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီး… ဆန်းစစ်သင့်ပါတယ်ပေါ့..။
ဒါကလည်း…ရွာထဲမ၀င်ခင်ကတည်းက…ခြံစည်ရိုးအ၀မှာကပ်ထားတဲ့…စည်းကမ်းတွေပါပဲ..။ ဒါကို…မသိလို့ကျော်သွားတာမျိုးလည်းမဖြစ်သင့်သလို…သိရဲ့နဲ့…အရွဲ့တိုက်တားမျိုးလည်း မဖြစ်သင့် ဘူးပေါ့…နော့ဗျာ..။
especially အနေနဲ့ အဆိုပြုရရင်တော့…လွတ်လပ်စွာဆူညံခွင့်ကို..မိမိစိတ်ကြိုက်ထင်ရာစိုင်း ပြီး…အသုံးမချသင့်ပါဘူး..။ နောက်ပြီး…တင်ပြချက်တွေထဲမှာ…ကိုယ်နဲ့သဘောမမျှတာတွေ တွေ့တဲ့အ ခါ…အလိုမကျတာကတော့..ဖြစ်မှာပါ..။ ဖြစ်ပါ…။ တားပိုင်ခွင့်လည်းမရှိပါ..။ တစ်ခါ…တင်ပြချက် တွေထဲမှာ…မိမိနဲ့..သဘောမျှတာတွေ တွေ့တဲ့အခါ…သဘောခွေ့ အလိုကျတယ်ဆိုတာကလည်း… ဖြစ်မှာပါပဲ..။ ဖြစ်ပါ..။ တားပိုင်ခွင့်လည်းမရှိပါ..။
အဲ….ရိုးသားစွာ ဖွင့်ဟ၀န်ခံရရင်တော့….အလိုမကျမှုတွေ တွေ့လို့…ပြန်လည်တုန့်ပြန်ချေပ တဲ့အခါမှာသာ…ရိုးသားမှုနဲ့..စိတ်ဓါတ်ကိုအရင်းတည်ပြီး…တုန့်ပြန်ချေပနိုင်ပါစေ…။ အလိုကျတဲ့အဖြစ် မျိုးနဲ့..ချီးမွမ်းထောပနာပြုမယ်ဆိုရင်လည်း…ဘက်လိုက်ခြင်း ကင်းပါစေပေါ့…။
ဆိုလိုချင်တာက…တင်ပြချက်၊ ချေပချက်တိုင်းဟာ…တစ်ပါးသူရဲ့အပေါ်..ဘေးလည်းမသီစေ ချင်သလို….ရန်လည်းမ`ခ`စေလိုတာပါ…။
ဆန္ဒကိုပြောတာပါဗျာ..။ ဒါက…ဆုတောင်းလို့ရနိုင်တာမျိုးမှမဟုတ်တာ..။ တစ်ခုတော့ရှိတယ်.. လွန်ခဲ့တဲ့လပိုင်းလောက်က…ကျုပ်တင်ထားတဲ့..post ဖြစ်တဲ့.. လူနဲ့အရောင် ဆိုတဲ့ထဲက အတိုင်းပြန် ပြော (ပြန်ရေး)ရရင်…လူဟာ…ကိုယ့်ရဲ့အတွေးအခေါ်အတိုင်း…ပြောဆို၊ ပြုမူချက်တွေအလိုက် အရောင်ထွက်တယ်ဆိုတာပါပဲ..။
မိမိရဲ့တင်ပြချက်…ချေပချက်တွေအတိုင်း…မိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ..အရောင်ထွက်မှာပါပဲ..။ ထွက်တဲ့အရောင်အတိုင်းလည်း…တန်ပြန်အကျိုးကို ရရှိခံစားရမှာပါ..။ အဲ…ကွာသွားတာကတော့..သူ တော်ကောင်းရောင်နဲ့…သူယုတ်မာရောင်ပါပဲ..။
`အမှန်ကိုရှာဖွေသူများပြော…လုပ်ရင်..အမှန်တွေဆီကလွဲ… တကယ်အမှန်တွေဆိုတာ. .လက်တွေ့လုပ်ရမယ်…လူတွေစစ်ပွဲက..အစွဲတွေနဲ့တိုက်… ငါဆိုတဲ့အစွဲက…ကင်းနိုင်ဖို့ခက်… မှန်ကန်တဲ့တရားရှိနေလည်း… မတွေ့ဘူး…`တဲ့ ..။ သီချင်းခေါင်းစဉ်ကတော့..။`လက်တွေ့` ပါ….။
စာကြွင်းအနေနဲ့သဘောထားပြီးတော့… လူနဲ့အရောင်…ဆိုတဲ့ပို့(စ်)ကိုဖတ်ကြည့်ချင်သော ဆန္ဒများရှိခဲ့ရင်..ဖွင့်ကြည့်ရလွယ်အောင်…ညွန်လိုက်ပါရစေ..။(ကြော်ငြာလုံးဝမဟုတ်ပါ)။
ကိုယ်မြင်တဲ့ကိုယ်လက်ခံတဲ့အယူအဆကို သူများကို ထိခိုက်စေတဲ့ အသုံးအနုန်းမပါဘဲ
အချက်အလက်ကျကျနဲ့ ပြောကြ ချေပကြမယ်ဆိုရင် ဖတ်ရသူမှာ ပညာတိုးတာပေါ့။
ဆြာသစ်ရေးတာကို ဆြာဘလက် ပြန်ပြန်ပြောပြနေသလို
ဆိုသလို ကိုယ့်အရောင်ကြောင့် ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာ (ကိုယ်/စိတ်) ညစ်နွမ်းသွားစေတာမျိုးကိုတော့ ရှောင်သင့်တယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
သဂျီးကို ရွာဆူတာ ကောင်း/မကောင်း ရွာထဲမှာ စကားနပန်း လုပ်ခိုင်းရင် ကောင်းတယ်ထင်တယ်။
ကိုယ့်အမြင်ပြောရရင်တော့ ရွာဆူရင် ဝေးဝေးကပဲ နေတော့မယ်။
သဂျီးက လူငှားပြီးပြောခိုင်းနေသလား အောက်မေ့ရတယ်..
ဦးပြောသလို..ဆူတယ်ဆိုလဲ အမြဲတော့ မဆူနိုင်ပါဘူး..
မကြာခင် အေးသွားမှာပါ..၀ုတ်ပါဒယ်..ကောင်းစေချင်လို့ ဆူကြတာ..ဆူပစေ..ဆူပစေ (ကြပ်ပေးတာမဟုတ်. )
စကားပုံ ရှိတာကတော့ သူကြီးမလိမ္မာလို့ ရွာဆူတာ ရွာပျက်တာပဲကြားဖူးတယ်
အခုက သူကြီးကကောင်းပြီး ဆူနေကြတယ်ဗျာ